King James Version of the Old Testament iqukethe uhlu imiyalo kaNkulunkulu - 10 Izono Imiphumela Ebulalayo Yokungakwazi ezingaphasi. Nampa: nokuziqhenya, okuyize, intukuthelo, ukucindezeleka, ukudangala, ukuphinga, ukuhaha, ukuminza. Kwezinye izimo, lo mqondo yokudabuka nokucindezeleka kuhlanganiswe ukuze zibe yisikhungo esisodwa, nakuba lokhu imiqondo kuyiwa.
izono Mortal kangaka okuthiwa ngenxa yokuthi abanalo intando nesifiso ukulwa nabo kuholela ukufa okungokomoya.
Njengoba ojwayelekile, uhlu eziqukethwe ekuqaleni kwanoma yisiphi incwadi yomthandazo, iqala ukuqhosha noma ukuzikhukhumeza, okuyinto ngezinye izikhathi zama ukuhlukanisa. Ngempela, ngokuvamile kakhulu wasebenzisa inkulumo ethi 'siyaziqhenya wezwe lakithi "noma" ngokuziqhenya likhona kwi insika bomdabu lenkaba ifulege ... "njalo njalo. N. nje njenganoma iyiphi isono, nokuziqhenya ubangelwa eziyizici abantu abaningi bazizwa ngokuthi izimfanelo. Kukhona ngisho ukuqhathanisa uyazikhulumela nengokomfanekiso yale mizwelo ne inja, okuyinto enhle uma uqapha endlini, bese kuba yingozi uma Ukulunywa zonke ilandelana noma ukuphahluka endlini. izono Mortal axhunyiwe. Umuntu okholelwa ukuthi izwe lakubo kuyinto enhle, futhi kujabulise ngokusebenzisa yokuthi uhlala ezweni lakubo, akufanele okwamanje cabanga konke okwabezizwe izakhamuzi lesibili ekilasini, ukuthi unelungelo ukukhuthaza. Kungenjalo-ke uyowela umuntu awele esonweni sokuziqhayisa, bese ulaka ababi, okungukuthi intukuthelo. Isibonelo isimo sengqondo esinjalo maqondana nezwe zingakhiqiza izenzo zokuphatha laseJalimane lobuNazi ngubani babezibheka unelungelo ukubathobisa futhi abaqothule 'ohlanga olulodwa eliphansi' izizwe.
Pride - udadewabo kuyize
Okunye izono ofayo futhi zihlukaniswe nezenzo zokulunga umugqa omncane. Watshala ubunjalo babantu isidingo sokudla ngezinye izikhathi iba isifiso nehaba ukudla ngangokunokwenzeka izitsha eyinkimbinkimbi kakhulu futhi liphenduka nokuminza.
Kuyinto isazela yemvelo yokuzalana iba ithuba okuxekethile (Ubuhlobo bobulili amaningi ngaphandle imizwa, nje ngenxa nenkanuko).
Ukudabuka abhekana naso ukushonelwa abathandekayo, kungabangela ukulahlekelwa ephelele engasenandaba nokuphila.
Thrift futhi frugality ngezinye izikhathi siguqulelwa ukuhaha, ukuthanda izinto ngokweqile eyinqaba ngoba abantu abahahayo.
Kunezinye "isiphambano" uxhumano ukuthi izono ofayo ukondla off nomunye. Ngokwesibonelo, umuntu oyisiminzi ngokushesha iqala ukuba nomuzwa wokuthi nakwezinye izinto eziphathelene nako, bese uba abe isiphingi. Ozidlayo akakubekezeleli ukuphikiswa futhi ngokuvamile esabela ukugxekwa ayethule bethukuthele. ukudabuka ngokweqile liphenduka yithemba. ngokuvamile uthando lwemali kuwumphumela nokulwela isifiso ukuze afakazele ukuphakama kwakhe kwabanye futhi sibonise ngomnotho kanye okunethezeka.
Indlela ezithakazelisayo kule nkinga sefilosofi esaziwayo futhi isazi sezinto eziphilayo Konrada Lorentsa. Encwadini yakhe ethi "Izono eziyisishiyagalombili olubulalayo isintu ophucukile" Usosayensi Austrian iveze imiqondo theosophical kusukela iphuzu okunengqondo buka, ngokuletha isisekelo kwezenhlalo kanye esingokwesayensi isisusa yokuziphatha kwabantu nokumisa ukufana nazo ukuziphatha izilwane. Ngokusho kwakhe, imiqondo Christian okuhle nokubi, Uma unganakile, abstract kanye abstract, izimpande okunengqondo ijulile, equkethe izincomo, ukuhambisana okuyilona elidingekayo ukuze umuntu ukusinda sonke isintu.
Theophany Sezindela, Kostroma e Kostroma
Kanjani ukuba sivume icala futhi wenhlanganyelo Inhlangano yebhola lezinyawo
Three-uhlamvu usayizi vesi. Uhlamvu futhi emithathu ilunga vesi osayizi
Ukufakwa transformer ezincane: ubuchwepheshe, imfundo, ukubuyekezwa
Emahostela namahhotela Kandalaksha: Phumula ngenhla kwe-Arctic Circle
Waba yini nendlela ukwenza i-portal ukuze isihogo "Maynkraft"?
Goitre multinodular yegilo indlala: izimbangela, ukuxilongwa kanye nokwelashwa izici